Ukusebenza kokumaketha kokuqukethwe kubhalwe kahle, kuveza ukuhola okungaphezulu kwama-300% ngezindleko eziphansi ezingama-62% kunokumaketha kwendabuko, imibiko DemandMetric. Akumangalisi ukuthi abathengisi abasezingeni eliphakeme baye basusa amadola abo baya kokuqukethwe, ngendlela enkulu.
Isithiyo, nokho, ukuthi i-chunk enhle yalokho okuqukethwe (i-65%, empeleni) kunzima ukuyithola, ikhulelwe kabi noma ingathandeki kulabo ababhekiswe kubo. Leyo yinkinga enkulu.
"Ungaba nokuqukethwe okuhle kakhulu emhlabeni," kwabelana u-Ann Rockley, umsunguli we Ingqungquthela Yokuqukethwe Okukhaliphile, "Kodwa uma ungakwazi ukuyifinyelela kumakhasimende akho nakulindelwe ngesikhathi esifanele, ifomethi efanelekile nakwidivayisi abayikhethayo, akunandaba."
Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okwenziwa ngesandla kaninginingi kuziteshi eziningi akukhona okusimeme, uRockley uyaxwayisa: “Asikwazi ukuyikhokhela le nqubo enamaphutha.”
Ngomunye umbono, i- I-Content Marketing Institute ibika ukuthi abathengisi be-B2B abahlolwe ekuqaleni konyaka basebenzise isilinganiso samaqhinga wokuqukethwe ayi-13:
I-93% - okuqukethwe kwezokuxhumana nabantu
I-82% - izifundo zamacala
I-81% - amabhulogi
Ama-81% - ama-enewsletters
I-81% - imicimbi yomuntu uqobo
Ama-79% - ama-athikili kuwebhusayithi yenkampani
79% - amavidiyo
I-76% - imifanekiso / izithombe
I-67% - infographics
66% - ama-webinars / ama-webcast
65% - izethulo eziku-inthanethi
Ama-50% noma ambalwa - imibiko yocwaningo, ama-microsites, ama-ebook, phrinta amamagazini, izincwadi zokuphrinta, izinhlelo zokusebenza zeselula, nokuningi.
(Amaphesenti abhekisele kubakhangisi abahloliwe basebenzisa lelo qhinga.)
Futhi nokho, ngaphezu kwengxenye yokuqukethwe kokumaketha kuyinkinga, ngokusho kwe- SiriusDecinqumo umbiko:
U-17% awaziwa kubasebenzisi
11% kunzima ukuthola
U-10% awunaso isabelomali
Ikhwalithi ephansi eyi-8%
Uma okuqukethwe kwakho okungu-65% kufihliwe noma kuphikisa abafundi, uyazi ukuthi kukhona okumele kushintshe.
Ngakho-ke, isikhalazo nesethembiso sokuqukethwe okuhlakaniphile: okuqukethwe okuhlakaniphe ngokwanele ukuziphindisela futhi kuzivumelanise nomfundi ngamunye nesiteshi sakhe asithandayo. Umphumela: Ukushintshwa komumo, okuqukethwe okuvumelana nezimo okubamba izinhliziyo zabafundi, izingqondo nezikhwama.
Okuqukethwe okuhlakaniphile kubonakala ngalokhu okulandelayo:
Ucebile Ngokwesakhiwo - Isakhiwo senza ukuzenzekelayo kwenzeke, futhi zonke izici zokuqukethwe okuhlakaniphile zixhomeke kuso.
Kuhlukaniswe ngokomqondo - Usebenzisa imethadatha ukuqinisekisa ukuthi inhloso nomongo kuyahambisana nomfundi.
Kutholakale Ngokuzenzakalelayo - Kutholakale kalula futhi kudliwe bobabili abanikazi bokuqukethwe nabasebenzisi.
Kuyenzeka futhi - Ngaphandle kokuvuselelwa kokuqukethwe okuvamile, izingxenye zayo zingahlanganiswa futhi zishintshwe ngezindlela eziningi.
Kuyabuyiseka kabusha - Iyakwazi ukuhlelwa kabusha ngokwe-alfabhethi, ngesihloko, ifomethi, eyakho nokuningi, ngomuzwa womsebenzisi ofanelwe kakhulu.
Iyakwazi ukuguquguqulwa - Ukuzivumelanisa ngokuzenzakalela ngokubukeka nangokokuzithokozisa kumamukeli, idivaysi, ishaneli, isikhathi sosuku, indawo, izindlela zokuziphatha ezedlule, nokunye okuguqukayo.I-infographic elandelayo (ezansi kwalokhu okuthunyelwe) igxumela ngokujulile kokuqukethwe okuhlakaniphile, nokuthi ingakulungisa kanjani ukukhishwa kokuqukethwe okusaphazekile futhi kufeza injongo yayo yokuheha, yokutshala kanye nokuguqula abathengi. (Futhi, ukunciphisa izindleko zokukhiqiza okuholela kakhulu, ukuqala.)
Uma ungenzi lutho olunye, ungathuthukisa okuqukethwe kwakho nokusebenza kwakho ngokushesha ngokuhlakulela imikhuba elandelayo:
Sebenzisa ucwaningo olujulile nokunikezwa okwanele ukwazisa okuqukethwe kwakho, kufane nentatheli.
Yenza okuqukethwe kucaciselwe umthengi.
Sebenzisa ama-meta tag ukusiza amakhasimende athole lokho akufunayo.
Phindaphinda, usebenzise futhi wenze okuqukethwe kuvumelane.
Qasha ababhali bamakhophi.
Hlaziya ukusebenza kokuqukethwe.
Linga, ulandelele, ufunde futhi uzivumelanise nezimo.
Zonke izinto ezicatshangwayo, okuqukethwe okuhle ngaphandle kwamathuluzi afanele kufana nokuqasha umshayeli wemoto yomjaho nokumnika ibhayisikili ukuze anqobe umjaho. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokuhweba ngebhayisikili lakho ngenjini yokuqukethwe engcono.
Bheka lokhu okuhle infographic ngu-Nweba, ukubonisana ngu ithimba lethu, ngokuthi ungayikhulisa kanjani i-IQ yokuqukethwe kwakho kanye nabafundi ababandakanyekayo bomhlaba.
Tags: izihlokoisenzoAbakhangisi b2bukumaketha kwe-b2bblogsumthengi personaUcwaningo lwama-caseUkukhangisa OkuqukethweInhlolovo Yesikhungo Sokumaketha Okuqukethweukusebenza kokuqukethweababhali bamakhophii-vieo yebhizinisiiwebhusayithi yebhizinisiucwaningo olujulileebooksimeyiliizincwadiukuhlolwaimifanekisoimicimbi engaphakathi komuntuOkuqukethwe OkukhaliphileOkuqukethwe KwezentengisoI-Marketing Infographicsamathegi e-metaama-micrositesIzinhlelo zokusebenza zeselulaweliklasi newesikoloizintshumayelo eziku-inthanethiIzithombephrinta izincwadiphrinta omagaziniukuphindiselaucwaningoimibiko yocwaningosebenzisa kabushaokuqukethwe ezokuxhumithrekhiama-webcastwebinarsiwebhusayithiamaphepha amhlophe
I-RTB-Media: Ukukhangisa Kwesikhathi Sangempela, Ukunikezwa Kwesiteshi Esiphambili kanye Nemininingwane